Dreame L10 Pro faakuum nadiifiyaha, falanqaynta, waxqabadka iyo qiimaha | Androidsis
Dreame L10 Pro vacuum cleaner, falanqaynta, waxqabadka iyo qiimaha
Rafa Rodriguez Ballesteros | 21/11/2021 16:00 | Qalabka kale, Reviews
Markan waxaan la nimid dib u eegis naadir ah agagaarka qaybahaas. Gudaha Androidsis waxaan had iyo jeer kuu keenaynaa falanqayn xiiso leh oo ku saabsan aaladaha Android. Laakiin waxaan sidoo kale kuu sheegaynaa dhammaan qalabka ugu fiican ee xilligan, iyo waxyaabaha ku saabsan qalabka kaabaya taleefannada casriga ah. Waxaan awoodnay inaan tijaabino dhowr maalmood nadiifiyaha vacuum ee Dreame L10 Pro.
Uno oo ka mid ah qalabka aadka loo dalbado ee xilligan Haddii aan ka hadalno qalabka guriga. Uma baahnid automation-guri si aad ugu shaqeyso L10 Pro. caqli badan, nadiifiye vacuum ah oo awood u leh inaan ilaalino nadaafadda gurigeena iyada oo aan loo baahnayn dadaal. Haddaba waa maxay waxaan awoodnaa inaan xakameyno mar walba anagoo kaashanayna mobilada.
1 Waqti badbaadi oo nadiifi guriga markaad maqan tahay
2 Furida fakuumka nadiifiyaha Dreame L10 Pro
3 Muuqaalka jirka iyo naqshadeynta Dreame L10 Pro
4 Sidee ayuu Dreame L10 Pro u qabtaa shaqadiisa?
5 Dreame L10 Pro Shaxda Tilmaamaha Farsamada
Waqti badbaadi oo nadiifi guriga markaad maqan tahay
Laga yaaba in la haysto nadiifiyaha faakuumka oo kaliya uu qabto shaqada waxa loo arkaa horumar wayn. Laakiin horumarka dhabta ah ee noocyadan aaladaha ah ay bixiyaan waa taas way qaban karaan shaqada wasakh ah (ciqaab loogu talagalay) xitaa marka aan guriga joogin. Mahadsanid casrigayaga iyo App-kayaga, waxaan xakameyn karnaa nadiifinta guriga meel kasta oo aan joogno.
Dreame L10 Pro wuxuu leeyahay astaamo horumarka suuqa ugu dambeeyay si isticmaalkeeda, iyo dhammaan ka sarreeya, natiijooyinka ay bixiso, si buuxda loogu qanacsan yahay. Awood u tudhin nuugista, xakamaynta caqabadaha iyada oo aan loo baahnayn naxdin, iyo a xakamaynta saxda ah ee shaqada la qabtay taas oo laga dareemi karo isha qaawan. Hadda waxaad ka iibsan kartaa Dreame L10 Pro Amazon oo ah qiimaha ugu fiican, iyo kuboonka dhimista ee DML10PBF ee 10 euro.
Fakuum nadiifiyaha furka Dreame L10 Pro
Taabo samee liiska waxa aan heli karno gudaha sanduuqa L10 Pro Marka lagu daro nadiifiyaha laftiisa, waxaanu leenahay sal dhigid, kaas oo ay tahay inaan ku xidhno fiilada korontada. Waa inaan sameynaa dhig meel si fudud loo heli karo faaruqintar. Waxay si fiican ugu adag tahay dusha kasta mana qaadato sida ugu badan ee moodooyinka kale.
Waxaan sidoo kale ka helnaa gudaha sanduuqa burushka dhinaca si gees walba oo guriga ka mid ah loo nadiifiyo. The taangi loogu talagalay adkaha iyo haanta dareerayaasha, kuwaas oo la isweydaarsan karo oo aan la rakibin karin isku mar. Ugu dambayntiina, xaaqid nadiifinta dhulka.
Muuqaalka jirka iyo naqshadeynta Dreame L10 Pro
Naqshadeynta Dreame L10 Pro waxay ku dhacdaa gudaha, waxaan dhihi karnaa, 100% waxa aan ka filan karno nadiifiyaha vacuum ee robotka. Waxay leedahay qaabka aan filayno waxayna fulisaa shaqada aan filayno inay qabato. Laakiin waa in aan sheegno in ay tahay natiijada isbeddelka muhiimka ah iyo horumarinta tignoolajiyada ugu dambeeyay.
Sida aan arki karno, waxay leedahay a qaab goobeed, sida nooc kasta oo kale oo suuqa ah. Xaaladeena, waxaan helnay nooc ka mid ah midab madow dhalaalaya, inkastoo aan sidoo kale iibsan karno Dreame L10 Pro oo caddaan ah. Lagu sameeyay balaastiig xoog leh oo leh geeso lagu ilaaliyo walxo caag ah si aysan u xumeyn alaabta guriga.
Iibso Dreame L10 Pro hadda Amazon oo ku dalbo kuubboonka dhimista ee € 10 DML10PBF
Xagga sare waxaan ka helaynaa a module oval halkaas oo shidma laser ku yaal. Midkan, oo leh boodhka laysarka waa awood u leh inuu akhriyo caqabadaha iyo khariidad aagga halka uu ka shaqaynayo. On this waxaa ku yaal taabashada taabashada. Saddex badhamada sida badhanka shid/dami. Badhanka guriga, kaas oo loo isticmaali doono in vacuum nadiifiyaha loogu diro gacanta saldhiga. Iyo badhanka xakamaynta ee nadiifinta hore loo duubay iyo habaynta nidaamka.
en el frontal ee nadiifiyaha vacuum, waxaan aragnaa sida Dreame L10 Pro, leeyahay laba hawada sare ee laser-ka ah oo loo isticmaali doono in lagu ogaado walxaha taas oo ay sabab u tahay u dhawaanshaha ama muuqaal hoose ma ogaanayo dareenka sare. Sidan ayaad uga fogaan kartaa "caqabadaha" nadiifiyeyaasha kale aysan ogaan karin oo ku dhamaanayaan isku dhac ama jiid.
In hoose waxaan aragnaa sida giraangiraha kaas oo uu haysto Dreame L10 Pro, marka lagu daro ka weyn inta la filayo, waxay leeyihiin usheeda dhexe si buuxda kor u vacuum nadiifiyaha si looga fogaado caqabadaha ilaa 20mm sare. Waxaan aragnaa aagga nuugista, qaybta ay ku burushka dhinaca. Qaabkan, qaybta aan ku rakibi karno taangiga dareeraha ama adkaha ayaa ku yaal qaybta sare, taas oo aan ku geli doono kor u qaadista daboolka.
Sidee ayuu Dreame L10 Pro u qabtaa shaqadiisa?
Ka dib markii dhowr maalmood lagu tijaabiyo guriga, waxaan xaqiijin karnaa inay si fiican u qabato shaqadeeda. Halkay marto, kaas oo ah dhammaan sagxadda guriga oo aan ku jirin alaab guri. wax walba waa nadiif. Macnola'aan ma laha a 4.000 Pa nuugista awoodda, in ka badan xitaa qaar ka mid ah nadiifiyeyaasha fiilada. Haddii aad u baahan tahay awoodda nuugista iyo waxtarka nadiifinta, hel Dreame L10 Pro Amazon oo codso kuubanka DML10PBF.
Su wadada, marka dusha la aqoonsado oo la sawiro. Way dhammaatay. Waxa ay aad ugu soo dhawaataa gidaarka si aanay u jirin meel bannaan oo aan la damin. Mahadnaqa buraashka dhinaceeda, ma jirto xabbad boodh ah ama jajab rooti ah oo la iska caabbiyo. Laydhkaaga iyo akhrintiisa ee "caqabadaha" ka dhigaysa in aan lagu garaacin alaabta guriga. Oo waxay maareysaa inay ka soo baxdo kursi hoostiisa, ama miiska, iyada oo aan dhib badan lahayn.
Baaskii ugu horeeyay ee Dreame L10 Pro waxoogaa gaabis ah, wakhtiga ay qaadanaysona maaha kii caadiga ahaa. Waxa ugu horreeya ee uu sameeyo waa ka samee khariidad guriga. U qaybi guriga qolal iyo qaab dhismeed ayaa laga sameeyay aagga lagu hamiyo aagagga. Sidan oo kale, mar kasta oo aad bilowdo waqtiyada isxiga waxaad mar walba sameyn doontaa dariiq isku mid ah. IYO nadiifinta waxay noqon doontaa mid aad waxtar u leh waqtiga iyo isticmaalka.
La la qabsiga vacuum cleaner waa runtii cajiib. Falanqee caqabad kasta oo cusub oo samee waddo cusub si aad uga fogaato iyo sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah. Xaalad kasta waxa ay awood u leedahay in ay qaado dariiqa ugu gaaban si aad u samayso nadiifinta ugu badan ee suurtogalka ah ka hor inta aanad u baahnayn kharashka batteriga.
La shaqada xaaqin wuxuu la shaqeeyaa nidaam la mid ah moodooyinka kale. bilaabay dareere ku shubaya hab la xakameeyey ilaa xaaqin hoose la qooyay, oo sidaas daraaddeed waxay nadiifinaysaa sagxada baas kasta. Si loo hawlgeliyo shaqadan waa in aan ku darnaa biyo leh badeeco haanta ku jirta y ku dheji lifaaqa suufka. Iyada oo qalabkan meesha yaala, waxaad qaban doontaa shaqo isku dhafan, marka hore faakiyuumaynta kadibna xoqin isla goobtaas. Shaqada xaaqida, nidaamku aad buu u eg yahay, laakiin ma aha inaan ku darno biyo haanta.
Dreame L10 Pro Shaxda Tilmaamaha Farsamada
Buuq 54 dB
Awood nuugista 4000 Pa
Batariga 5200 Mah
Madax-bannaanida Ilaa 150 daqiiqo
Waqtiga ku amraya 3/4 saacadood
Cabbirada X x 350 350 96 mm
Awood adag oo taangi 570 ml
Awoodda haanta dareeraha ah 270 ml
Qiimaha 399.99 €
Xiriirinta wax iibsiga Dreame L10 Pro
Koodhka qiimo dhimista ee € 10 DML10PBF
ansaxnimada kuuban dhimis laga bilaabo 19-11 ilaa 29-11
Maabaynta laser aad u saxan.
Potencia nuugista 4000 Pa.
Nadiifinta by meelo iyo qolal kala duwan.
Madaxbanaanida ilaa 150 daqiiqo ama 250 mitir oo laba jibbaaran.
Buuq qiiqa soo baxayaa wuu ka sarreeyaa intii la filayey, wax lagu sharraxay awoodda nuugista.
Ogaanshaha roogga waa dhib, haddii ay dhumuc weyn tahay, waxay u fahamtaa inay caqabad ku tahay oo ay iska ilaaliso.
Ku dhejiyay: Nofeembar 21 ee 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: Nofeembar 19 ee 2021
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Dreame L10 Pro vacuum cleaner, falanqaynta, waxqabadka iyo qiimaha
5-ta apps ee ugu fiican ee saaxiibo loogu samayn karo Android
Sida bilaash loogu daawado Formula 1 sanadka 2021